ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »6Smarter လက်ထပ်ဘို့အချိန်မီအကြောင်းသိကောင်းစရာများ!
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 23 2021 |3မိဖတ်ပြီးသား
အလွန်ကြီးစွာသောအမှန်တရားကိုအသုံးအနှုန်းကိုရှိတယ်, "မေတ္တာသည်ပင်မျက်စိကန်းသည်။ "
ဒါဟာဘာကြောင့်လည်းလောက်သောစာရင်းဇယားများအရ 50% ထို U.S အတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏. ကွာရှင်းခြင်းအဆုံး.
မသိမိုက်မဲအများအပြားဒေသများရှိချမ်းသာကိုပေးစေခြင်းငှါသော်လည်း, အသက်အဘို့အမိတ်ဖက်အပေါ်ယူပြီးသူတို့ထဲကတစ်ဦးမဟုတ်ပါ. အဘယ်အရာကိုသင်တို့မသိသောနေ့စဉ်ဒရာမာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, စိတ်ဖိစီးမှု, ကျန်းမာရေးမကောင်း, unmet မျှော်လင့်ချက်များ, မပျော်ရွှင်, နောက်ဆုံးမှာတော့ ... ပြုတ်ဆက်ဆံမှု.
သင့်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကစားတဲ့ကစားရန်မလိုပါ. သင်၏မေတ္တာဇာတ်လမ်းတစ်ခုပျော်စရာဇာတ်သိမ်းရေးသားဖို့ဖြစ်နိုင်ဒါဟာင်, သင်လက်ထပ်မှီသင်တို့ရှေ့သို့စဉ်းစားလျှင်.
ယင်းတွေ့ရှိချက်နှင့်အကြံပြုချက်များ၏ကောင်းများစွာ ole '' ဘုံသဘောအပေါ်မှာအခြေခံထားပါသည်, အတွေ့အကြုံနှင့်ယုတ္တိဗေဒ. အခြားသူများ hit အဖြစ်မှန်ပြပွဲ၏ယဉ်ကျေးများမှာ, Bridezilla.
6 Smarter ကိုလက်ထပ်ဖို့အခြေခံမူများနှင့်အလေ့အကျင့်:
မှန်တယ်. ကျနော်ဒီနေရာမှာ "Debbie Downer" ဖို့မုန်း; ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့င်. အမျက်တော်ထွက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, ကျက်, လောင်းကစားဝိုင်း, တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း, ဆက်ဆံရေးဟာအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေများသို့တိုးမြှင့်သည်ကို ထောက်. နှင့်ဈေးဝယ်စွဲလမ်းမှုကိုပဲကုသထားမည်မဟုတ်. ကံမကောင်းစွာပဲ, အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်ယူပြီးတစ်ခုဝယ်ယူ "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" ဝယ်ယူတူလောက်ဖြစ်. မည်သို့ပင်အခြေအနေ, ယခုကိုယ်တော်၏ဥစ္စာင်. ဝယ်သူရဲ့နောင်တရှောင်ရှားရန်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပါ.
2. ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဆွဲဆောင်တတ်သော်လည်း, core ကိုဆင်တူရိုးမှားနှင့်အတူစုံတွဲကြာကြာကြာရှည်လေ့.
ဘယ်သူကမှကိုယ့်ကိုယ်တစ်ဦးကကာဗွန်မိတ္တူလက်ထပ်ထိမ်းမြားသငျ့. ပျင်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်, နှင့်တိုးတက်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့သွားရာလမ်းကိုအနည်းငယ်သာ ပူဇော်.. ဆဲ, သင်၏နှစ်ဦးကိုဘုံတွင်ရှိသင့်သောအရာတို့ကိုအချို့ရှိပါတယ်. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း, သင့်ရဲ့တန်ဖိုးကို system ကို, နှင့်အနည်းဆုံးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်ဝါသနာ. ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရန်အချို့သောအပိုဆောင်းသည့်ဒေသများဖြစ်ကြောင်း: သင်၏နှစ်ဦးကိုဘယ်လိုကလေးတွေအများကြီးလိုပါ? Big မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်သေးငယ်? အောက်လွှတ်တော်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းကို? ဒီမှာစိတ်ကူးရယူပါ?
3. သင်သည်သူတို့၏အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက, သူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာငွေစာရင်းသို့ချိုးဖျက်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုငွေချေး, "ပြဿနာတစ်ခုဟူစတန်ရှိပါတယ်။ "
မည်သည့်နှစ်ရှည်၏အောင်မြင်မှု, လေးနက်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာယုံကြည်မှုအပေါ်၌တည်တည်ဆောက်ထားသည်. သင်ရှိသည်သို့မဟုတ်သင်မပါဘူး, ဖြစ်စေ. တချို့လူတွေကိုပုန်းဖို့ဘာမှမရှိဘူးလျှင်တွေ့မည်သော်လည်း, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့အကောင့်လှည်း blanche ပိုလျှံရှိသည်နိုင်ဖြစ်သင့်. မလိုအပ်–လူတိုင်းရဲ့ privacy တစ်ဒီဂရီကိုခံထိုက်. တနည်းကား, ယုံကြည်မှုတစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်! အဲဒီသင်တန်းဖြစ်ပါသည်, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ပရိယာယ်၏သမိုင်းကြောင်းရှိတယ်မဟုတ်လျှင်. အခြားအချိန်တွင်အခြားစာမူင်.
4. "သင်ခုန်မီနက်ရှိုင်းကြည့်ရှု,"တရားသူကြီး Mablean အမြဲသူမ၏ရေပန်းစားတီဗွီကိုတရားခွင်၌ show မှာပြောဖို့အသုံးပြု. ထိုသို့လိုက်နာရကျိုးနပ်တဲ့သင်ခန်းစာင်.
သင်ကအခြားလူတစ်ဦးကိုသိရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ကြာ "တံမြက်စည်းကိုခုန်" ခြင်းမပြုမီ. အတူတကွအနည်းငယ်ကြုံတွေ့ရ. သူ / သူမစိတ်ဖိစီးမှု၏ခေတ်၌မည်သို့ပြုမူသည်ကိုကြည့်ရှုပါ, အကောင်းဆစဉ်နှင့်မကောင်းတဲ့, အနာရောဂါနှင့်ကျန်းမာရေးစဉ်အတွင်း, အကောင်းဆုံးရလဒ်အတွက်.
အပတ်စဉ်တိုင်းတစ် Bridezilla, ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေတချို့အစားရယ်စရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချစမတ်ဆိုတာဒီလူတွေကိုသက်သေခံ. သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်တော်မမူပါ. ဒီနေရာမှာဥပမာတခုင်. တစ်ဦးကမင်္ဂလာဆောင်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ် $60,000 မင်္ဂလာဆောင်ပေါ်, သူမကသူအောင်ရဲ့အဘယ်မှာအလုပ်ရရှိထားသူတောင်မှ $24,000 တစ်နှစ်ကို. အဆိုပါစုံတွဲသည်, ရလဒ်အနေနှင့်, သူတို့ရဲ့ကျောက်ကုန်းပေါ်မှာအကြွေးတင်စီးနင်း၏လေးလံသောဝန်ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပြည်ထောင်စုထွက်စတင်. ဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံးနှစ်အနည်းငယ်ဘို့မိမိတို့ယောက္ခမနှင့်အတူနေထိုင်နေ. အအေးမ. သင်ကွာရှင်း၏ဦးဆောင်အကြောင်းတရားများတဘဏ္ဍာရေးကြောင်းကိုသိခဲ့ပါ? မင်္ဂလာဆောင်ပဲတနေ့ကြောင်းကိုသတိရပါ, မင်္ဂလာဆောင်စဉ်အမြဲတည်လိမ့်ရန်ရည်ရွယ်နေစဉ်. သူကသူမ၏အထူးနေ့၌ "မင်းသမီး" ကဲ့သို့ခံစားရရန်လိုတဲ့မင်္ဂလာဆောင်သည်ပကတိင်တောင်မှ, သူမနဲ့တူကိုမဖြုန်းသင့်ပါ "မင်းမျိုးမင်းနွယ်။ "
6. စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ညီမျှခြင်းသို့ factor ဘာသာတရားကို.
wedded စံ၏နှစ်ပေါင်းများစွာအိမ်ထောင်ပြုခြင်းဤခြောက်ခု Cardinal စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါ.